ANM. Mikasika ny fandaharana tao amin’ny TV RECORD nilazana fa : « mpikarama sady bolokim-bazaha ny ANM » - Tout pour la restitution des îles malagasy
Ny Association Nosy Malagasy (ANM) dia manao izao fanambarana manaraka izao.
Manoloana ny filazana nataon’ny Sekretera Jeneralin’ny Antoko politika iray nandritra ny fandaharana famakafakana tao amin’ny TV RECORD fa : « mpikarama sady bolokim-bazaha ny ANM » dia tianay no mitondra izao fanazavana manaraka izao ho an’ny mpiray tanindrazana.
Ireo Fikambanana rehetra mitaky ny famerenana ireo Nosy malagasy ao anatin’ny filaminana sy ny fanarahana ny Làlana iraisam-pirenena no mivondrona ao anatin’ny ANM.
Tsy mikarama na mpitondra tenin’ny frantsay na mpivarotra tanindrazana ny ANM toy ireo Fikambanana hafa diso fantatry ny maro.
Ny ANM dia milaza mazava fa :
Ho tombontsoa ny vahoaka malagasy no fototra nijoroany ary manana tanjona amin’ny famerenana ireo Nosy malagasy (Iles Eparses) ho amin’ ny fanorenana sy ny fanarenana ny firenena. Foto-kevi-dehibe roa tsy afaka misaraka ireo satria alohan’ny fiverenan’ireo Nosy ireo dia tokony efa manana drafitra mazava hitantanana izany isika mpiray tanindrazana ;
Fikambanana mahaleo-tena izy, ary tsy manana fironana na firehana ara-politika manokana;
Ny iray amin’ireo Fikambanana mivondrona ao aminy dia nandray andraikitra manoloana ireo mpanjono mpiray tanindrazana namoy ny ainy tany an-dranomasina vokatry ny hetraketraky ny tafika an-dranomasina frantsay tamin’ny 29 mars 2014. Nijery ifotony ny raharaha ary nanao antso avo tamin’ny fitondram-panjakana malagasy, tamin’ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena sy Antenimieran-doholona frantsay tamin’ny 20 jona 2014 ny amin’ny tokony hijerena akaiky ireo fianakavian’ny mpanjono niharan-doza sy ny fahazahoan’ny mpanjono nentim-paharazana manohy ny asa fivelomany izay nanomboka tamin’ny 1832 ao anatin’ny fari-dranomasina malagasy. Tsy nisy valiny izany ka voatery nitondra ny raharaha teo anivon’ny « Tribunal international du droit de la mer ». Nambara tamin’izany fa tsy maintsyfikambanana iray mijoro ara-panjakana no mitondra ny fitoriana ka izany no anisan’ny antom-pisian’ny ANM raha tonga teto an-tanindrazana ireo mpitsara iraisam-pirenenamalagasy niasa an-taonany maro tany ivelany ;
Heni-kaja ny firenena malagasy manana an’ireo mpitsara iraisam-pirenena tia tanindrazana ireo;
Tsy amin’ny alalan’ny fanonganam-panjakana velively no ahazoana ireo Nosy malagasy ireo satria tsy eken’ny Vondrona iraisam-pirenena ny fanonganam-panjakana. Diso lalana tanteraka isika malagasy raha misafidy ny fanonganam-panjakana satriahitarazoka hatrany ny famerenana ireo Nosy malagasy ireo kanefa ny ao Mozambique dia hiroso amin’ny fitrandrahana tsy ho ela miaraka amin’ireo orin’asa nanao fanadihadihana manodidina ny Nosy malagasy Juande Nova ;
Nisara-bazana ireo mpitaky ny Nosy malagasy tamin’ny taona 2015 manoloana ny firesahana « fanonganam-panjakana » tao anatin’ny hetsika ;
Ny ANM dia manao antso avo fa :
Na aiza na aiza misy anao, na inona na inona firehan-kevitra hijoroanao, na inona na inona adidy sy andraikitra tananao eto amin’ny tany sy ny Firenena, Malagasy iray ihany isika.
Mila ny finonao sy ny fandresen-dahatrao ny fanatanterahana ny “Fikaonan-doham-pirenena ho famerenana ireo Nosy Malagasy” na “‘Symposium national pour la restitution des Iles Malagasy” izay ho tanterahan’ny vahoaka malagasy masi-mandidy ny faha 23 jolay 2016 ao amin’ny Lapan’ny Tanàna Antananarivo Renivohitra.
Ny tanjona iombonana dia ny famerenana ho amintsika ireo Nosy Malagasy, antoka iray ho fanorenena sy fanarenana ny Firenentsika.
Tonga ny fotoana. Mila mifanome tànana isika Malagasy
Natao teto Antananarivo, androany faha 21 jona 2016
Filoha nasionaly ANM